Nootropic Fasoracetam ndị kachasị ewu ewu: Gịnị na-enye anyị?
Kedu ihe a na-emekarị na mbaracetam: gịnị ka ọ na-enye anyị?
Ihe niile banyere Fasoracetam
1. Akụkọ na mmalite nke Fasoracetam
2. Nhazi nke Action
3. Ihe bara uru nke Fasoracetam
4. Akara aro maka Fasoracetam
5. Mmetụta mmetụta nkịtị nke Fasoracetam
6. Ntuziaka na Ahụmịhe nke Iji Iji Fasoracetam eme ihe
7. Esi na ebee zụta Fasoracetam
Nootropics bụ otu n'ime ihe ndị na-emepụta taa na Fasoracetam na-ebute ụzọ. Ọ bụ otu n'ime ụlọ ahịa kachasị ama na ahịa na ọtụtụ ndị na-ahọrọ iji iji mee ka ha nwee mmekorita. Ị ga-ekweta na ka ị na-arụ ọrụ gị kwa ụbọchị, ị chọrọ karịa ihe oriri. Mgbe ụfọdụ, ị nwere ike ịchọta onwe gị na ọnọdụ ọ bụla n'agbanyeghị na ị na-agbalị iri nri ọcha, mmega ahụ, ụra nke ọma, ị ka na-enwe nsogbu na-agbalị ịnọgide na-elekwasị anya ma kpalie ya.
Ọzọkwa, n'ime ụwa a na anyị na-amụta ihe ọhụrụ kwa ụbọchị, ụbụrụ gị nwere ike ịdaba na ụbụrụ na ịmalite ịla n'iyi. Enweghi ụra zuru ezu na izu ike nwere ike ime ka ọ dị njọ ma gbalịsie ike ịmụrụ anya n'oge niile nwere ike bụrụ ihe na-agaghị ekwe omume. Ọ bụ mgbe ahụ ka ịchọrọ na ịchọrọ mgbakwunye nke nwere ike ime ka uche gị dị elu n'enweghị nsogbu na-emetụta ahụike gị. Ka a sịkwa ihe mere ndị ọkachamara ejiri ọgwụ ndị a rute iji mee ka ike gwụ ndị mmadụ. Ọ bụghị naanị na ha na-enyere ha aka ịga n'ihu mana ha na-arụ ọrụ dị mkpa n'inyere mmadụ aka ịmatakwu ihe.
ewere Fasoracetam bụ otu n'ime ụzọ ndị nwere ike isi nyere gị ike site na ụbọchị site na ị hụ na ị nwere ike zuru ezu na ahụike ị chọrọ.
A makwaara dị ka NFC-1, LAM-105, na NS-105, Fasoracetam (110958-19-5) dị adị kemgbe mmalite 1990s. A na-ekewa ya dị ka otu n'ime ezinụlọ ndị racetam nke ọgwụ ọjọọ, Nippon Shinyaku, bụ ụlọ ọrụ Japan na-ere ọgwụ na-eburu n'uche ịmalite ọgwụgwọ maka nkwarụ vascular. Ụlọ ọrụ ahụ jiri ihe karịrị $ 200 nde na-eme nchọpụta banyere ọgwụ ahụ ọ bụ ezie na ọ daa na 3 n'oge na-enweghị ike ịrụ ọrụ.
Mgbe a gbahapụrụ ya, enwere mmasị na mgbakwụnye ahụ weghachite na 2013 site na ụlọ ọrụ a na-akpọ Neurofix mgbe ọ zụtara ụkọchukwu ọgwụ na Nippon Shinyaku. Aevi Genomic Medicine natara Neurofix wee malite ịmalite ịnwale ọnwụnwa nke ndị nọ n'afọ iri na ụma bụ ndị tara ahụhụ site na nchegbu, autism, ADHD na ndị gụgharịrị mkpụrụ na-agụ nri nke ndị na-emepụta glutamate.
Na 2015, Ụlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ọgwụ Na-ahụ Maka Ọgwụ na Nchịkwa nke United States nyere ndị mmepe nke Fasoracetam aka ịmalite na-eduzi ụmụ mmadụ ma na-ebufe ọgwụ na mpaghara mpaghara mpaghara. Dị ka ọ dị ugbu a, Fasoracetam nọ na 2 nke na-eme nchọpụta na-eme nchọpụta ma ọ bụrụ na ọgwụ ahụ bara uru n'ịgwọ ọrịa ọrịa autism.
Dị ka agbụrụ niile dị n'ahịa, a ghọtabeghị ya etu Fasoracetam si arụ ọrụ. Otú ọ dị, nchọpụta e mere gosiri na ọ na-arụ ọrụ n'ụzọ ndị a;
Ọ na-eme ka ndị nabatara dị na cortex maka gamma-aminobutyric acid nke bụ transmitter na-emechi. Fasoracetam na-agbanwe ọrụ GABA-B na-anabata ndị na-anabata ya na-eme ka ọnụ ọgụgụ GABA dị na sistemụ ahụ na etiti ụbụrụ na etiti.
Nakwa, glutamate bu GABA bu ihe di mkpa ma bu ihe di mkpa nke neurotransmitter nke na-eme ka mmuta ihe di mma, na-ebelata nchegbu, na-akwalite ụra, ma na-enwe mmetụta ndị na-eme ka obi dị jụụ.
Ọ na - eme ka acetylcholine wepụtara na ụbụrụ ụbụrụ. Acetylcholine bụ neurotransmitter nke dị na ụbụrụ na onye ọrụ ya bụ ime ka ncheta, mmụta na cognition zuru oke. Fasoracetam na-arụkwa ọrụ dị ka cholinergic site na ịba ụba nke choline na hippocampus na cortex. Choline bụ ihe na-edozi ahụ nke na-arụ ọrụ dị oke mkpa n'ime okike nke acetylcholine n'ime ụbụrụ.
Omume cholinergic ọ bụghị naanị na-eme na Fasoracetam, ma ọ na-eme na aniracetam, piracetam na ihe ndị ọzọ nootropics dị na ezinụlọ racetam. A maara ha niile na ha na-eme mgbanwe dị mma n'akụkụ niile nke cognition. Mgbe ụfọdụ, enwere ike ịchọ nnukwu ihe ị ga-eji dochie anya ahụ gị ruo n'ókè nke na ọ na-adaba. N'ihi ya, ọ nwere ike iduga n'ọnọdụ dị ala, ụfụ ụbụrụ, na isi ọwụwa. Iji mesoo mmetụta a, ị nwere ike iwepụta oge ọzọ.
Ụzọ ọzọ nke Burkinaracetam ọrụ bụ site na ịmegharị ụfọdụ ndị na-anabata glutamate a maara dị ka ndị na-enweta glutamate metabotropic (mGluR). mGluR na-arụ ọrụ dịgasị iche iche na ụbụrụ ya gụnyere mmelite nke mmụta na ebe nchekwa na imegide nchegbu. Ndị ọrụ mGluR a maara nke ọma asatọ na-arụ ọrụ aka iji nọgide na-enwe nguzozi ya na mmadụ abụọ n'ime ha na-eme ka obi ụtọ ahụ dịkwuo elu. Ndị ọzọ mGluR isii ndị ọzọ na-enyere aka n'ibelata ihe ize ndụ nke neurotoxicity site na ibelata obi ụtọ nụ. Glutamate dị oké mkpa n'ime ahụ n'ihi na ọ bụ ihe na-akpali akpali nke neurotransmitter.
Mgbe enweghi nhapu na oke ogugu aru, mmadu nwere ike inwe nsogbu site na nsogbu di iche iche nke uche na nke aru; epilepsy, schizophrenia, ADHD, nsogbu ịda mbà n'obi na ọrịa neurodegenerative, dịka, ọrịa Alzheimer.
Na ọmụmụ banyere ụmụ anụmanụ, Fasoracetam gosipụtara ọrụ nke ndị mGluR abụọ ahụ na-emechi emepe nke na-eduga ná njedebe nke ọrụ glutamate n'ime ụbụrụ. N'ọnọdụ ndị ọzọ, Fasoracetam nwere ike ịchịkwa ndị na-anabata glutamate nke na-eme ka mmiri na-edozi ahụ na-eduga ná mweghachi nke nguzozi n'ime usoro glutamate niile. Nke ahụ bụ ihe mere Burkinaracetam ji bụrụ onye na-erite uru nye onye ọ bụla nwere ADHD, ọnọdụ na-ejikọta na ọganihu dị ala na-enweghị isi na-eme dị ka ihe na-akpali akpali.
Ya mere, anyị nwere ike ikwu na Fasoracetam na-arụ ọrụ na ndị natara elekere atọ iji nye nsonaazụ yiri ya. Ihe mbụ ọ na-eme bụ na ọ na-arụ ọrụ na choline neurotransmitter n'ihi ya na-akwalite ọrụ nnabata ya. Nke abuo na ọ na - akpali mmụba na ọnụọgụ ndị nnabata GABA, na n'ikpeazụ, ọ na - agbanwekwa ndị na - anabata glutamate. Omume a niile na-eduga na mmelite na ikike nghọta nke ndị ọrụ Fasoracetam.
Dabere n'ọmụmụ ihe dị iche iche a rụrụ na 1 na 11 nke nyocha nke ikpe mara na Fasoracetam ọtụtụ n'ime uru ya bụ legit. Ka anyị leba anya na uru ndị ọ na-eweta na tebụl.
Ndekọ Nchịkọta na ADHD
Taa, ADHD bụ otu n'ime ọnọdụ jupụtara ebe niile nke ndị okenye na-eche ihu. Nke a bụ n'ihi na ọtụtụ mmadụ na-etinye ọtụtụ ọrụ n'otu oge nke na-eduga n'ịbelata nlebara anya ha. A na-eji Fasoracetam mee ihe dị ka isi ọgwụ maka ọtụtụ ndị ọrịa ADHD. Ọ na-arụ ọrụ nke ọma na ngwa ngwa iji belata mgbaàmà. Ihe niile ị ghaghị ịma tupu ịzụta SARM
Mgbe mgbanwe dị na GABA, na enwere mgbanwe nke ndị nabatara ya, mmadụ nwere ike ịda mbà n'obi. Nke a bụ n'ihi na ewezuga obi ụtọ dị jụụ karịa; ọ na-ejikwa neurogenesis na neural maturation. Nchegbu na-ebelata ọmụmụ nke akwara ọhụụ bụ ndị na-ahụ maka iwu nke cognition na ọnọdụ uche. Mgbe neurogenesis na-abanye, usoro GABA na-enyere aka ịchịkwa ọnọdụ.
Na-eme ka Ọganihu na Nchekwube dị elu
Inweta Burkinaracetam na-enwekarị ike ibuli anya gị. Ọ na-egbochi enweghị enyemaka nke pụrụ ịkpata obi nkoropụ na ịda mbà n'obi. Fasoracetam na-agba ume na choline nke na-enyere aka melite iche echiche na itinye uche. A maara Choline iji nyere aka na mmezi nke iguzosi ike n'ezi ihe nke mkpụrụ ndụ, ntụgharị ntanetị na mmepụta nke homocysteine.
Ọzọkwa, a na-emegharị choline na acetylcholine nke na-etinye uche ngwa ngwa site na ngwụsị akwara iji nyere aka zipu ozi ntanetị. Acetylcholine na-eme ka mmeghachi omume nke nzaghachi na-eme ka ọ dịkwuo mma ma na-enyere aka n'ịkwado anya.
Mụbaa Ịmụta Ikike
Ihe dị iche n’etiti ụmụ akwụkwọ kachasị elu na ndị nwayọ nwayọ bụ ezigbo nghọta nke ezi ndị na-amụ ihe nwere. Mgbe mmadụ cognitive nkà na-mma, na-amụta n'ihi na mfe na ngwa ngwa. Ozugbo ị jiri Fasoracetam, a ga - eme ka ikike nghọta gị dịwanye mma, ike uche gị ga - esikwa ike. Ọ na - eme ka usoro ihe ọhụụ dị ọhụrụ na - arụ ọrụ nke ọma site na mmezi nke cholinergic nke neuronal.
Burkinaracetam na-arụ ọrụ na-amụba ọkwa nke choline na ụbụrụ nke na-enyere aka igbochi ọdịda nke netwọk dendritic. Ọ na-emekwa ka ụbụrụ cerebral metabolism dị ngwa. Achịkọ nke Fasoracetam ejikọtara ya na nnukwu mmelite na ike karịsịa mgbe a na-ewere ya dị ka ọgwụgwọ.
Enwere ike Njirimara Anxiolytic
Nchegbu na-aba uru ka ọ na-akwadebe uche maka asọmpi karịsịa ma ọ bụrụ na ọ dị na mgbakọ ahụ. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ọkwa dị n'akụkụ dị elu, o yikarịrị ka ọ ga-egbochi ịrụ ọrụ ọgụgụ isi. Nchegbu na-eduga n'oge ịla azụ, enweghị ike ime mkpebi ma mee ka o sie ike iche. Mgbalị iji belata nchegbu bụ ọrụ ndụ zuru oke nke nwere ike ịchọ ka ị gbanwee ụbọchị gị iji gbochie njedebe ndị na-eweta site nhụsianya na ụjọ.
Nchegbu na-abịa n'ihi nsonaazụ na nsogbu na-emetụta uche dị ka ndị a nootropics mara iji nyere aka n'ụzọ dị mkpa. Otu nootropic dị otú ahụ bụ Fasoracetam ebe ọ bụ nkwalite mmụba na onye na-echegbu onwe ya nke na-enyere aka mee ka GABA dịkwuo ụbụrụ iji gbochie ọrụ ọ bụla ọzọ. Omume ndị a na-eme ka okwu ire ụtọ dị nwayọ, nwee obi ike yana na-eme ka ndị ọzọ nwee mmekọrịta.
Ọ bụ ezie na enwere ike iji ọtụtụ ndị ọrụ ọgwụ ọgwụ ọzọ maka ọrụ ndị yiri ya, Fasoracetam bụ nhọrọ ka mma. Ihe kpatara nke a bụ n'ihi na ọ na-arụ ọrụ na inducing anxiolytics mgbe ejiri ya ogologo oge. Ndị jiri Fasoracetam nwere ike ikweta na ọ naghị eme ka ahụ riri ahụ ma na-eme ka ahụ nwee nchekasị maka ịdabere. Mgbe okporo ụzọ GABA na glutaminergic dị mma, mgbe ahụ, a ga-ebelata ohere ụra na oké ịdaba.
O nwere ike igbochi ọnwụ nchekwa
Icheta ihe ncheta na-agbagwoju anya ma ọ bụrụ na ịnweghị ike icheta ihe ndị ị maara ma ọ bụ ndị mmadụ. May nwere ike iche na ntụkwasị obi gị, ugwu na nnwere onwe gị na-ebelata ya na-enweghị enyemaka. Burkinaracetam amara iji nyere mmadu aka iguzogide uche ya na ncheta ncheta.
Nnyocha e mere na oke, Fasoracetam mere ka ọ ghara igbochi nsogbu nchekwa nke kpatara site na baclofen, onye na-eme ihe maka onye na-anabata GABA-B. A kọkwara ya iji belata amnesia site n'ịbawanye ogo acetylcholine na site n'ibelata ihe kpatara njalite nke GABA-B.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịnọgide na-akpali akpali ka ị na-eme ihe ndị ị na-eme kwa ụbọchị, mgbe ahụ, ị ​​ga-enwerịrị mmụba nke uche. Taa, ọtụtụ ọgwụ ọjọọ na-ekwe nkwa inyere onye aka iji mezuo nke ahụ kama ọ bụ mmadụ ole na ole na-anapụta ya. Ntughari nootropic ọ bụghị naanị nkwa ma ha na-enye nsonaazụ dị ịtụnanya karịsịa na mmelite arụmọrụ. Ọganihu nke nkà ịtụgharị uche pụtara na ọ bụghị nanị na ị nwere ike ịchọta mma ma nweekwa ọhụụ na ọhụụ.
Ọnwụnwa e mere na ụmụ anụmanụ na-egosi na mgbe ha nyesịrị ọgwụ a, ha na-aghọkwu ihe okike. Ugbu a, ha nwere ike ijikwa ihe karịrị ike ha tupu ha ewere ihe mgbakwunye ahụ. Otu ihe a na-eme mmadụ. Onye nwere ike ilekwasị anya na iru ihe mgbaru ọsọ na ibu ọrụ ha. Nrịbawanye na ọkwa nke mkpali na-enyere aka ịnagide ndụ n'ụzọ ka mma ma dịkwuo mma nke ha mere tupu oge ahụ.
Na-arụ ọrụ dị ka ihe na-akpali akpali
Nke a nootropic na-arụ ezigbo ọrụ dị ka ihe na-akpali akpali ebe ọ bụ na ọ nwere ike inye aka n'ịmalite ọrụ nke ụbụrụ gị wee mee ka ọ dị ọhụrụ maka ogologo oge. Site na reviews nke Fasoracetam, ị nwere ike ịsị na ọtụtụ ndị nwere mmetụta na-enye ume ọhụrụ ọ na-enye.
(1) Ihe omuma
N'ime ule ikpe ahụike emere na ndị ọrịa ADHD, a na-eji ọnụ ekwu okwu nke 100, 200 na 400 mg. N'ikpeazụ, ọtụtụ ndị ọrụ kwuru na Fasoracetam dị irè na usoro onunu ogwu dị n'etiti 100-800mg kwa ụbọchị. Burkinaracetam enwere ike iwere obere ihe, nke pụtara na ị nwere ike idowe ya n'okpuru ire gị na usoro dị n'etiti 5-15mg kwa ụbọchị.
Maka akwa ụdackeracetam nke na - agaghị emetụta gị ka ọ bụrụ mmetụta ndị ọzọ, ịnwere ike iburu 100mgs otu ụbọchị. Ọ bụrụ na ọ bụ oge mbụ gị na-ewere googleracetam, ị nwere ike ịhọrọ maka obere mkpụrụ nke dị mma. Onye a na-atụ aro ya bụ 10-15mg kwa iji ọgwụ na-ewere ma ọ dịkarịa ala ugboro atọ kwa ụbọchị. Ọ na-agbakwunye ụbọchị 30-50mg kwa ụbọchị. Ozugbo ị nwalere ma aru gị nwere ike ịnagide ọgwụ ahụ, ị ​​nwere ike ịbawanye ụbụrụ gị. Nnukwu nnyefere pụrụ iduga na ọgbụgbọ na ịgba agbọ, n'ihi ya, ị ga-akpachara anya ka ị ghara iji ọtụtụ ihe.
Oge kachasị mma iji buru Burkinaracetam bụ ụtụtụ tupu ịre nri ọ bụla. Ọtụtụ Nyocha reviews Faracetam ekwu na n'oge ahụ ọ na - enye mmetụta dị mma. Iwere ya tupu ị lakpuo ụra pụkwara ime ka ị nwee nsogbu na-achọ ịchọta ụra.
Fasotaretam dị nchebe mgbe ma ndị agadi ma ndị na-eto eto. Otú ọ dị, ọ na-ewe oge dị ogologo maka ndị toworo eto iji kpochapụ ọgwụ ahụ na usoro ha. Ha nwekwara ike ịmalite ịmalite ọbara n'ọbara dị elu mgbe ha na-eji ụbụrụ alaracetam dị ala tụnyere ndị na-eto eto.
Ihe mere na nootropic a na-ejikarị ụbụrụ eme ihe site na obere ndụracetam ọkara ndụ nke pụtara na ọ na-ewepu ya ngwa ngwa site n'ahụ.
Ọ dị mma na-ewere Fasoracetam n'onwe ya, mana ụfọdụ ndị nwere ike ịchọrọ ịtọ ya. Mgbe ị na-arụ ọrụ, ị na-ewere Burkina Faso na ndị ọzọ nootropics. N'ihi nke a, ị nwere ike kpughee mmetụta ka mma karịa ike site na nchịkọta Fasoracetam.
Nchịkọta a bụ otu n'ime ihe kachasị ike n'ihi ụfọdụ ihe kpatara ya. Ozugbo i jikọrọ ihe abụọ ahụ, enwere ọganihu dị ukwuu na acetylcholine n'ime ụbụrụ na-enye onye ọrụ ahụ ezigbo mmetụta. Fasoracetam bụ onye kachasị mma GABA-B, ọ ga-akawanye mma na nlele gị ma n'otu oge ahụ coluracetam ga-eme ka ọnọdụ gị dịkwuo mma.
A na-ekwu na coluracetam, stacketam stack na-enyere aka na nkwarụ na-adịghị mma, mmetụ obi na ịta. Ọ bụrụ na ịchọrọ nchịkọta nke ga-eme ka ị lekwasị anya ma kwadoro, mgbe ahụ, ị ​​ga-atụle na-ewere nchịkọta a.
Usoro ogwu ya; 15mg Burkinaracetam (110958-19-5) na 10mg Coluracetam were ugboro ma ọ bụ ugboro abụọ n'ụbọchị.
Ọ bụrụ na ebumnuche gị niile na-arịwanye elu, ọ bụ nke a bụ ihe kacha mma Fasoracetam maka nke a. Ma ndị Burkinaracetam (110958-19-5) na Noopept na-enye aka site na choline iji nye mmetụta dị ike.
Uru nke na-abịa site n'iji nchịkọta a bụ na ọ na-enyere aka na-eche echiche ma na-eme ka mmata mara ihe na-eme ka ị ghara inwe obi ụtọ. Maka nchịkọta nke ga-eme ka ị lekwasị anya ụbọchị dum, nke a bụ nhọrọ kacha mma.
(3) Burkinaracetam utịp oge
O yikarịrị ka ị ga-enweta ọgwụgwọ ọgwụgwọ Fasoracetam mgbe nkeji iri atọ jiri ya. Mgbe a na-edozi ya, ọ na-arụ ọrụ ahụ ọsọ ọsọ, ị nwere ike ịnwe mmetụta Fasoracetam naanị n'ime nkeji iri. Mmetụta ahụ nwere ike ịnwụru gị ruo awa asatọ. Fasoracetam ọkara ndụ dị ihe dị ka elekere abụọ ma ọ bụ atọ wee gaa n'ihu na-agbakọta n'ime ahụ yana iji ya eme ihe oge niile.
(4) Mmekọrịta ọgwụ ọjọọ
Enweghị ọtụtụ ọgwụ nwere ike imetụta arụmọrụ nke Fasoracetam. Naanị ọgwụ nwere ike iji ya na-emekọrịta ihe bụ phenibut, ngwakọta nke na-arụ ọrụ site na ịgbalite ndị nnabata GABA. A na-ejikarị ya eme ka arụ ọrụ ọgụgụ isi belata ma belata nchekasị.
Fasoracetam na-eme ka mmeghachi omume phenibut mekwuo site n'ịba ụba nke ndị nabatara GABA-B ma belata ndidi na phenibut. Ọ bụrụ na a chọpụtala gị na nsogbu ahụike ọ bụla ma ọ bụ na ị nọ n'okpuru ọgwụ a chọrọ, mgbe ahụ, ị ​​ga-eche banyere ịkọrọ dọkịta gị tupu ị gaa cupracetam.
A gwara ndị inyom nwere mmuta ka ha ghara ịṅụ ọgwụ. Ụdị nwoke anaghị ekpebi ma ị nwere ike iwepụta mgbakwụnye a abụghị; Otú ọ dị, ibu nwere ike ịbụ ihe na-achọpụta.
Obu ihe kwesiri ka oburu na ihe obula nwere ike wepu ya. A maara nke ọma na ọgwụ a dị mma, ọ ga-abụkarị na ị ga-enweta ụfụ mmetụta ụbụrụ Burkina Faso ma ọ bụrụ na ị kpebie iji Fasoracetam mee ihe. Otú ọ dị, ọ dị mkpa ka ị rịba ama na ahụ anyị na uche anyị dị iche iche, ya mere, enweghi mmesi obi ike na ị gaghị enwe mmetụta ọ bụla ọbụna ma ọ bụrụ na ndị ọzọ ekwuola na ọ dịghị ihe ọ bụla kpatara nsogbu ọkpụkpụ ọ bụla na-akpata. Ụfọdụ bụ naanị mmeghachi omume nrịanya nkịtị nke nwere ike ịla oge, ma ọ bụrụ na ha anọgide na-aga, ị nwere ike ịkwụsị iji ya na-eme ihe.
Enwere ike ịta ahụhụ site n'aka ụbụrụ Fasoracetam na-adabere na ụfọdụ ihe, na ụzọ i si eji nootropic a akọwa oke. Igbubiga ihe ókè bụ otu n'ime isi ihe kpatara nsogbu ndị dị na ya. Inwe nnukwu ihe mgbakwunye kwa ugboro nwere ike ime ka o nwekwuo ohere inwe mmetuta utom alaracetam. Iji nweta nsonaazụ dị mma, a dụrụ gị ọdụ ka ọ bụrụ na ị ga-enweta naanị ụkọ akụrụngwa Fasoraketam; ma ọ bụghị ya, ị nwere ike ịkwụsị ahụ gị na ụbụrụ gị ka ọ ghara ime ka ọ pụta ìhè.
Ndị a bụ ụfọdụ n'ime mmetụta ndị metụtara Fasoracetam nke a kọọrọ;
Nhụjuanya site na mgbakasị ahụ nke na-akpata ọrịa, ie, afọ ọsịsa, afọ ntachi, ọgbụgba na ọgbụgbọ bụ otu n'ime mmetụta ndị kachasị na ọtụtụ ndị kwuru na ha ga-ata ahụhụ. Iji gbochie gị ịta ahụhụ site na nke a, were usoro ọgwụgwọ ziri ezi ma jiri Burkinaracetam mee ihe mgbe niile. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị chọpụta na mmetụta dị iche iche na-akawanye njọ, mgbe ahụ, ị ​​ga-ahụ dọkịta.
Isi ọwụwa na-adịkarị na racetam nootropics n'ihi na ha na-eduga ná mbelata nke choline nwere ụbụrụ. Mgbu nwere ike ịdị na-agakarị mana iwepụ isi ọwụwa, ịnwere ike ịnara Fasoracetam tojupụtara nke ahụ nwere isi mmalite, dịka, Alpha GPC. Iwere usoro onyonyo na-ezighi ezi na ojiji eji eme ihe na-egosi site na ịnweta nhụjuanya isi, yabụ ị kwesịrị ijide n'aka na ị na-ewere usoro ọgwụgwọ Fasoracetam ziri ezi. Ọ bụrụ n’inwe isi ọwụwa, hie ụra n’ihi na ọ na - enyere aka ịtọgharịa ụbụrụ. I nwekwara ike ime ka mmiri ị na-a increaseụ bawanye.
Ụfọdụ ndị mmadụ nwere ike ịda mbà n'obi ma ọ gaghị enwe ike ịhazi echiche ha n'ụzọ dị mma ozugbo ochisịrị Fasoracetam. Ihe dị mma bụ na mmetụta ahụ na-akwụsị mgbe ụfọdụ.
Ịbụ onye isi na-abụkwa otu n'ime mmetụta ndị mmadụ kọọrọ na ha na-ata ahụhụ site na karịsịa na nke mbụ mgbe ha jiri ya. Ha ekwuola na isi oriọna na-adabere mgbe o jiri mgbakwụnye mee ihe maka oge ole na ole.
Nye ndị ọzọ, a na-ekwu na ọgwụ a na-emetụta ndụ mmekọahụ ha n'ụzọ na-ezighị ezi site na ibelata libido na ibelata orgasms ha. Iji mmeju mmekorita nke nwanyi enwere ike inye aka imeri uzo a.
Ozugbo ị na-ewere nnukwu doses nke Fasoracetam, ị nwere ike ịta ahụhụ n'ihi ụra. Nke ahụ bụ ihe mere eji gwa gị ka ị were usoro ọgwụgwọ a tụrụ aro ka ọ na-enyere gị aka ịra ụra nke ọma.
6.User Review na Ahụmahụ nke Iji Fasoracetam
Ọ bụ ezie na ị nwere ike inwe obi uto banyere ịmalite ụbụrụ gị, ọ nwere ike ịchọ ịma ma ọ na-arụ ọrụ site n'aka ndị ji ya mee n'oge gara aga. Maka ndị ọzọ, ha nwere ike inwe obi abụọ maka iji ya eme ihe ma chọọ ịnụrụ akụkọ onye ọzọ maka ha ka ha mee mkpebi ha. Ọ bụghị naanị na nke a ga - enyere gị aka idozi obi gị kama ọ na - enye gị obi ike na Fasoracetam bụ ụzọ isi aga.
N'oge gara aga, ọtụtụ mmadụ ejiriwo ọtụtụ ndị jiri n'enweghị nsogbu na nke ọma, ọtụtụ ndị na-ejikwa ya enweela ahụmahụ dị mma na ọtụtụ ndị na-ekwu na ndụ ha agbanwewo n'ụzọ dị ukwuu ma ha chọrịrị ka ha mara afọ a na-adịbeghị anya gara aga. Ndị a bụ ụfọdụ n'ime ntụle ntụziaka Fasoracetam nke anyị nwetara n'aka ndị ahịa anyị
Luli na-ekwu, sị: "Ọnwa ole na ole gara aga, enwere m ihe mgbapụta na nke ahụ bụ naanị oge kachasị emetụ n'ahụ m. Agara m ụfọdụ ndị dọkịta, ma ọ dịghị ọgwụ m nyere m ka ọ na-arụ ọrụ. O wutere m nke ukwuu ma nọgide na-eche ihe nwere ike ịkpata nke a. Adị m naanị 30, enweghịkwa m ike icheta aha enyi m. Ọ dabara nke ọma, onye ọrụ ibe m na-arụ ọrụ na-atụ aro na m ga-eji Fasoracetam na ebe ọ bụ na m nwere oké ọchịchọ maka enyemaka, ọ nyere m iwu na m na Phcoker.com n'otu ụbọchị ahụ. N'ime izu anọ, ebe nchekwa m dịwanye mma. Enwere m obi ụtọ na enweghị ike ikele onye ọrụ ibe m na saịtị a magburu onwe ya. Dị ka ọ dị ugbu a, enwere m ike icheta ihe niile. Ndị enyi m na-ekwu na m nwere ike icheta ihe ndị m na-echeghị. M ga-atụ aro Fasoracetam nye onye ọ bụla na-ata ahụhụ. "
Juan na-ekwu, "Nwa m nwoke nọ na-arịa ADHD, dọkịta ya etinyewokwa ya n'ọtụtụ ọgwụ. Ha niile mere ka ọ ka njọ, nke a mesikwara m ike. Ana m ejiri ọtụtụ awa eme nchọpụta banyere ọnọdụ a na otu anyị nwere ike isi chịkwaa ya. Oke na-acho m ka m nyochaa ezi nlele anya nke Fasoracetam nke mere ka uche m di. M nyere ya iwu, na anyị Fasoracetam ahụmahụ dị egwu. Nri ahụ enyerela nwa m aka n'ụlọ akwụkwọ, ọ bụzi nwata akwụkwọ ka mma. Ọ na-ewe izu atọ ịmalite ịhụ mgbanwe ụfọdụ na ya, obi dịkwa m ụtọ na m maara banyere Fasoracetam. Ọ bụrụ na ị nwere ike inwe otu nsogbu ahụ, m ga-agba gị ume ịnwale ya. "
Bai na-ekwu, “Amaghị m ihe kpatara arụ ọrụ dara ogbenye na ịdị umengwụ ghọrọ akụkụ nke m n'ọrụ. Enwere m ike ilekwasị anya na itinye uche n'ihe mgbe awa ole na ole gachara ọrụ. Onye toro eto nọ na-eme mkpesa, m chọkwara enyemaka. Mgbe m jiri Fasoracetam ruo oge ụfọdụ, ọ dị m mma. Enwere m ike, ike m na itinye uche m alaghachila, enwere m ike ịrụ ọrụ ụbọchị niile na-enweghị mmetụta dị ka ụbụrụ m na-arụ ọrụ gabiga ókè. Uche m doro anya ma ugbu a, m mezue ọrụ ndị ekenyere n'ime obere oge. Amaara m na ọ na-ada ka ihe nzuzu, mana onye ọ bụla nọ n’ọrụ na-ajụ m ihe m ji. Ha anaghịzị akpọ m ọkpụkpụ dị umengwụ dịka ha na-akpọbu ma ha akpọpụtala m dịka onye ọrụ kacha mma na ngalaba anyị. Maka onye ọ bụla ka nwere obi abụọ banyere mgbakwunye a, m ga-arịọ gị ka ị dozie na Burkinaracetam zụrụ n'ihi na ọ bụ ego ọ bụla ị ga-eji. "
Chen na-ekwu, sị, "M jiri Phcoker.com mee ihe maka oge ole na ole, na mgbe niile, enwere m ọrụ kacha mma. Ọ bụ naanị saịtị ahụ nwere nkwado kachasị ahịa nke ndị ahịa na usoro ịzụ ahịa ya ziri ezi. Agaghị m enwe nsogbu ọ bụla na ha, ana m enwetakwa ngwongwo m mgbe oge. Phcoker bụ ihe atụ nke ebe a na-atụle ọnụahịa ha dị oke ọnụ na mma. M na-atụkwasị ha obi na ahụike m, m na-enye iwu maka Fasoracetam, ana m enwekwa obi ike na ọganihu m na-eme ka ọ bụrụ nke ọma. M ga-etinyere nyochaa ala ala m na-eme na ebe a n'ime otu ọnwa. Ọ bụrụ na ike gwụrụ gị ịzụrụ ihe mgbakwunye ma ghara ịba uru maka ego gị, Phcoker.com kwesịrị ịbụ ebe ị na-aga. "
Fan na-ekwu, sị, “N’afọ gara aga, ụjọ tụrụ m na m ga-ada ule m n’ihi na a chọpụtara na m nwere amnesia dị nwayọọ. Ike gwụrụ m n'ihi na enweghị m ike iche na m ga-ada ada mgbe m gbalịsiri ike na ọkara afọ agụmakwụkwọ niile. Nwa klas m mere ka m mara ya na Fasoracetam, eleghachighi m anya kemgbe ahu. Ikike iche echiche m abawanyela, enwere m ike icheta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile a kụziri na klaasị. Enwetara m nsonaazụ nke ikpeazụ, ma emebeghị m nke ọma kemgbe m banyere ụlọ akwụkwọ. Enweghị m ụbụrụ ụfụ, ihe mgbakwunye a aghọwo ọkacha mmasị. Ahụmahụ m Fasoracetam bụ sọọsọ! ”
Jinhai na-ekwu, sị, “Nwanne m nwoke na-arịa ịda mbà n'obi na nchegbu, n'oge na-adịbeghị anya ọ malitere igbu onwe ya. O mere ka ezinụlọ ghara ịsọpụrụ anyị n'ihi na o yiri ka o nweghị ihe na-arụpụta ihe. Usoro ọgwụgwọ niile na usoro ịnagide nsogbu dị ka ego efu. Fọdụ n'ime ọgwụ ya rụrụ ọrụ nwa oge ndị ọzọ hapụrụ ya na-arịa ọrịa thyroid. Ọ bụghị ruo mgbe enyi ya nke na-ata ahụhụ site na ya nyere nyocha nke Fasoracetam dị mma. Kemgbe ahụ ihe agbanweela ugbu a. Ọ bụ naanị otu ọnwa kemgbe ọ malitere ị medicationụ ọgwụ na enwere nnukwu ọdịiche na ọgụ ụjọ. O kwetara na ọ na-esikarị ike iche echiche na-agba ọsọ ma ụra ya na-atọ ya ụtọ. Ka ọ dị ugbu a, omume ya agbanweela nke ọma, anyị nwere ike ikwu na ọ bụ Fasoracetam niile. ”
Jun kwuru, sị, “Mgbe m bidoro ịzụ ahịa Fasoracetam izu ole na ole gara aga ma were ya n’okpukpe, enwere m obi ụtọ ịsị na ọ baara m ezigbo uru. Enwere m ọganihu dị mma na ọnọdụ m, ma enwere m obi iru ala ugbu a karịa ka m na-enwe tupu ịmalite iji ya. Ike m arịgoro, anaghịzi m eteta n'ụra n'ihi ike ọgwụgwụ. Ọbụna nke ka mma, enwere m ike ịrụzu ọtụtụ ọrụ m kwa ụbọchị na-enweghị mkpa nkwụsịtụ. Na 60, enwere m ike iji obi ike kwuo na enwebeghị mmetụta dị mma na ndụ m. Ichefughi na m na-ehi ura ugbua dika nwa ohuru mgbe imesịrị uru nke ukwuu. Obi abụọ adịghị ya na m ga-agwa ya onye ọ bụla chọrọ imeziwanye ọnọdụ obi ya. ”
Onye ọ bụla na-atụ anya ịbụ onye amamihe karịa ya / ya. Ọ bụ ezie na ọ bụghị ruo ogologo oge, inwe mmetụta na-eche echiche maka oge dị mkpirikpi pụrụ ime ogologo oge iji meziwanye ùgwù onwe onye. Burkinaracetam uzuzu abughi nani umu akwukwo, ma o biara nye onye obula nke choro inwe obi di nma nke puru ime ka otutu ndi mmadu. Ọzọkwa, onye obula choro ichota ndi ozo, na-ejigide ihe ha nabatara, ma cheta ihe niile ha chotara icheta nwere ike irite uru site na ihe nootropic a na-eme. Iji gbakwunye na nke a, Fasoracetam dị irè n'ịnagide ụfọdụ ọrịa na ọnọdụ anyị na-emeso na ndụ anyị kwa ụbọchị.
Buru n'uche na Fasoracetam adịghị ewepụta ihe ọ bụla dị iche iche n'ime anụ ahụ gị ma ọ bụrụ na ị na-enye choline nke bụ akụkụ dị mkpa nke ahụ gị chọrọ iji kwalite mmepụta acetylcholine. Nke ahụ bụ ihe zuru ezu mere ị ga-eji kwenye gị na mgbakwunye a bụ nanị ihe dị mma maka ahụ gị. Otú ọ dị, ọ dị gị mkpa ịnweta onye na-ere ahịa tụkwasịrị obi nke ga-eme ka ị kwadoro ngwaahịa gị.
Na uru nile nke nootropic a na-enye, ị nwere ike ịchọ ịma ebe ị nwere ike ịzụta ụraracetam. N'ụzọ dị mwute, ọtụtụ ndị chọrọ ịchọrọ gị ego dị mfe, ya mere, ị ga-azụta ụkọbararacetam bụ nke adịgboroja, nke ahụ nwere ike ọ gaghị enye gị nchọta chọrọ. Ụfọdụ nwere ike ọ gaghị ebu Fasoracetam ntụpu ma ndị ọzọ nwere ike ọ gaghị enwe ezi uche dị ka akara na label. Nke ahụ pụtara na ọ ga-abụ ihe efu nke ego ma nwee ike emetụta ahụ ike gị ma ọ bụrụ na ọ nwere ogige dị ize ndụ. Iji dị mma, ị kwesịrị ịmara ebe ị ga-esi gaa ahịa na ebe ị nwere ike ịzụta fatịlaịza na online.
Ya mere ọ bụrụ na ị na-achọ ebe ị nwere ike ịzụta Fasoracetam online, mgbe ahụ Phcoker.com bụ ebe kacha mma ịnọ. Anyị bụ ebe a pụrụ ịtụkwasị obi na ị nwere ike ime gị Burkinaracetam zụrụ ma nweta ọkwa kachasị elu na ahịa. N'adịghị ka saịtị ndị ọzọ nwere ike ịkasi gị obi site n'ịgwakọta ụrọ Fasoracetam na ndị na-eke ihe na ndị na-ejide ya, anyị bụ 100% ezigbo.
Anyị ga-enye gị Fasoracetam na ego kachasị ọnụ ahịa n'ahịa n'enwetaghị njirimara na àgwà ya. Na saịtị anyị, anyị na-enyekwa ya nnukwu powders maka ire na ego enyi. Enwere ike ịnwa gị ịzụrụ akara ule dị ọnụ ala mana oge niile mara na ọnụahịa dị ọnụ ala karịa, ọ na-ebelata ike ya na ọnụọgụ nke mmetọ. Ọ bụ gị ịhọrọ itinye ego ga-aba ego gị. Anyị na-ekwe nkwa na ndị ahịa anyị nwere ngwaahịa dị mma, yana mgbe anyị jiri ngwaahịa anyị, ị ga-amalite ịnweta nsonaazụ ya n'oge kachasị dị mkpirikpi. Uru ọzọ dị na ịzụta ngwaahịa anyị bụ na anyị na-ebuga ndị mmadụ ebe ọ bụla na n'oge. Ozugbo ị nyere anyị iwu, ị ga-ejide n'aka na ị ga-enweta ngwugwu gị n'enweghị nsogbu n'ime oge kachasị dị mkpirikpi. Y’oburu na inwe mmasi izu nnukwu powders, mgbe ahụ anyị nwetara ihe kacha mma maka gị.
Zụrụ Fasoracetam taa ma mee ka ụbụrụ gị nwee ike ịrụ ọrụ na oge dị nkenke na n'ụzọ kachasị mma.
Merchan, C., Morgan, R., Papadopoulos, J., & Fridman, D. (2016). Phenibut Overdose na Nchikota na Fasoracetam: Ọgwụ Ọjọọ nke Mmegbu. Akwụkwọ nke Clinical Intensive Care and Medicine, 1, 001-004.
Elia, J., Ungal, G., Kao, C., Ambrosini, A., Jesus-Rosario, N., Larsen, L.… & Sykes, B. (2018). Burkinaracetam na ndị nọ n'afọ iri na ụma nwere ADHD na usoro ntanetị dị iche iche nke glutamatergic na-emebi mGluR neurotransmitter signaling. Nkwukọrịta okike, 9 (1), 4.
Harmsen, B., Robeyns, K., Wouters, J., & Leyssens, T. (2017). A na-amụ banyere Fọdracetam nke Ọnọdụ Steeti siri ike: Pụrụ Iche Na-egbochi Ọgwụ Alzheimer. Akwụkwọ akụkọ sayensị, 106 (5), 1317-1321.